अमेरीकालाई किम जङ उनकी बहिनीको ध’म्की – Eps Sathi
March 18, 2021 803
उत्तर कोरियाली शा’सक किम जङ उनकी बहिनी किम यो जोङ्गले अमेरिकालाई ध’म्की दिएकी छिन। उनले नयाँ निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई ४ बर्ष चैनसँग निदाउने हो भने आफ्नो देशमा बा’रुदको ग’न्ध फै’लाउन बन्द गर्न भनेकी छिन।
अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जोइ बाइडेनले आफ्नो कोरियालाई हेर्ने निती तय गर्ने तयारी गरिरहेका बेला उत्तर कोरियाका शक्तिशाली नेता किमकी बहिनीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। उत्तर कोरियाले पनि अमेरिका र दक्षिण कोरियालाइ हेर्ने निती तय गर्दैछ।
किम यो जोङ्गले अमेरिकालाई अस्थिरताको कारण बन्न नहुने भन्दै भनेकी छिन “अमेरिकाको नयाँ प्रशासनलाई यो सुझाव छ कि समुद्र हुँदै आफ्नो भूमिसम्म आउने गरि बा’रुदको धु’वाँ फैला’उने प्रयास बन्द गरियोस्। आउँदो चार वर्ष शान्ति चाहन्छ भने तना’व वा झग’डा उत्पन्न गर्ने काम नगरोस्।”
तर अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग बार्ताको प्रयास पटक पटक गरे पनि सम्पर्क स्थापित नभइरहेको बताएको छ। गत फेब्रुअरीबाटै उत्तर कोरियासँग बार्ताको लागि प्रयास गरिएतापनि कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको बाइडेन प्रशासनले बताइरहेको छ। उत्तर कोरियाले अमेरिकामा नयाँ चुनिएका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई अहिलेसम्म स्विकार गरिसकेको छैन।
उत्तर कोरियाको आधिकारिक सरकारी पत्रिका रोडोङ सिनमुनमा किमको बिज्ञप्ति प्रकाशित भएको छ। बिज्ञप्तीमा अमेरिका शान्तिसँग ४ बर्ष सुत्न चाहान्छ भने अ’स्थि’रताको का’रण नबनोस् भनिएको छ। किम जङग उनकी बहिनी किम यो जोङ्ग उनको सल्लाहकार समेत रहेकी छिन्।
Prevनेप्सेमा आज ३ कम्पनीका २ करोड ८४ लाख कित्ता बोनस सूचिकृत
Nextकोरिया जाने प्रकृया सुरु हुन अझै १ महिना लाग्ने
सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीको आइपिओ कतिले भरे? कतिले पाउनेछन सेयर? जानिराखौं
कोरियामा विहानै भू’कम्पको धक्का, हेरौं कहाँ र कत्रो भू’कम्प गयो